स्वास्थ्य Archives - Page9of9- Suchana Daily
बिगत केही समय पहिले भारतमा प्लाष्टिकको चामल बजार भित्रिएकोले खुबै चर्चा पायो । त्यसको केही समय पछि नेपालका पनि बिभिन्न शहर र गाउँघरका चोक चोकमा हल्ला चल्यो । नेपालका बिभिन्न ठाँउहरुमा यस भन्दा पहिले पनि प्लाष्टिकको चावल भित्रिएको पुष्टि भएको छ । हालचालै भने गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट ८ मजुवामा प्लाष्टिकको.....
यदि तपाईलाई बन्दा काउलीको सुपले एक हप्तामा शरीरको अनावश्यक बोसोलाई पगालेर तौल घटाउँछ भन्ने कुराको जानकारी छैन भने आज हामी बन्दाको झोल सेवन गरेर जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउँदै छौं । शरीरको अनावश्यक तौल घटाउने यो अचुक बिधिको विशेषता भनेको उपचारको अवधि भर तपाईले जति बेला भोक लाग्छ.....
के के राख्न हुँदैन फ्रिजमा ? जानकारीको लागि सबैले पढ्नु होस र एक सेयर गर्नु होस।
एजेन्सी । यतिखेर गर्मी मौसम शुरू भएको छ । हामी अधिकांशको यो बुझाइ यो छ कि फ्रिजमा राखेपछि जुनसुकै चिज पनि ताजा रहिरहन्छ । तर कतिपय यस्ता चिजहरु छन् जुन फ्रिजमा राख्दा उल्टो हानीकारक हुन्छ । यी हुन् फ्रिजमा राख्न नहुने कुरा – १ अण्डा – फ्रिजमा अण्डा राख्दा त्यसको बोक्रामा रहेका ब्याक्टेरिया स्वास्थ्यका.....
पिसाबको रंगबाट थाहा हुन्छ शरीर भित्रको समस्या, जानकारी पढेर सबैलाई शेयर गराै
पिसाबको रंग शरीरको अवस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ । त्यसैले शरीरमा भएको रोगलाई पिसाबको रंगले संकेत गरिरहेको हुन्छ । कस्तो रंगको पिसाबले कस्तो समस्याको संकेत गर्छ हेरौं- रंगहिन पिसाब तपाईको पिसाबमा कुनै पनि रंग देखिदैन र पानी जस्तै छ भने तपाईको शरीरलाई आश्यकताभन्दा बढी पानी पीउनु भएको छ । एकैपटक धेरै पानी.....
जीरा तौल घटाउनको लागि चमत्कारिक तौल घटाउने पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । विहान खाली पेटमा जीरा पानी पिउँदा मेटाबोलिज्ममा हुने सुस्तता, पाचन प्रक्रियामा भएको गडबडी, इन्सुलिनमा हुने प्रतिरोधको रक्षा जस्ता समस्याको समाधान हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।यदि तपाई यस्ता समस्या, पेट बढ्ने जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ.....
के तपाईको पेटमा ग्याँस भरिने समस्या छ ? यस्ता छन् सजिला उपचार बिधि – यसरी समाधान गर्नुहोस
बेसार मसलाको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु हो । यसको जरा खासगरी परिकारको रंग बदल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ । बेसारलाई नेपालको पश्चीमेली भाषामा हदेली, हदेलो अथवा हल्दी भनिन्छ । हल्दीको रंग पहेंलो हुन्छ । हिन्दू धर्ममा पहेँलो रङको छुट्टै महत्व छ भएको कारणले बेसारलाई विशेष महत्व दिईने गरिन्छ । भिटामिन र खनिजको.....
समयमै चिकित्सकलाई आफ्नो समस्याबारे नबताउँदा क्याम्सरको उपचार जटिल बन्ने गरेको छ । चाँडो अस्पताल नजाने हाम्रो बानी नै छ । त्यसैले आफैले क्याम्सर भए नभएको बारे कसरी पत्ता लगाउने भनेर तपाईलाई जानकारी दिदैछौँ । बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा राजेन्द्र प्रसाद बरालले शरिरमा क्यान्सर रोग भए÷नभएको यसरी पत्ता.....
जानिराखौँ, भुटेको मकै खानुका ८ फाइदा
तपाई हामीमध्ये कतिपय भुटेका मकैका पारखी छौँ होला। भुटेको मकैको स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा गर्छ। यी हुन भुटेका मकैका फाईदाः १. भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन्। २. भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस.....
ल्वाङको प्रयोग नेपाली खानाबाहेक आयुर्वेदिक उपचारको लागि पनि हुन्छ। यसको प्रयोगले खानाको स्वाद त आउँछ नै त्यसबाहेक औषधीको रुपमा प्रयोग गर्दा यसले अनेकौं स्वास्थ्य समस्यामा फाइदा हुन्छ। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालयका स्वास्थ्य वृत्त विभागमा हेड अफ डिपार्टमेन्ट डाक्टर अवधेश मिश्राका अनुसार ल्वाङमा.....